Tetezana tapaka, Malagasy mifamono : fambara mampanahy | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Tetezana tapaka, Malagasy mifamono : fambara mampanahy
Tetezan-dehibe roa ankehitriny no fantatra fa tapaka ka tsy azo ampiasaina intsony. Samy mitondra miditra amina Faritra iray avokoa izy ireo ka ny iray hiditra any DIANA ny faharoa kosa hiditra any Atsimo Atsinanana. Manahiran-tsaina ny maro ny mieritreritra ny fifanojoan-javatra mitranga eto Madagasikara. Amin’izao fotoana voalaza fa hisian’ny « évaluation » avy amin’ny SADC momba ny fandriam-pahalemana izao no itrangan’izany zavatra rehetra izany. Mbola mirakitra fahatsiarovana ratsy ho an’ny mpiray tanindrazana maro io resaka tetezana tapaka io hatreto.
Maro ny mbola mahatsiaro ny zava-nitranga tao anatin’ny tolona tamin’ny 2001 sy 2002 ary tsy vitan’izany. Fomba iray hamaharana ny fifaneraserana amin’ny faritra samy hafa izany. Io tranga iray io dia manamora avy hatrany ny endrika fahirano sy fampisaraham-bazana eo amin’ny samy Malagasy. Marina fa miteraka fidiram-bola ho an’ny mponina manodidina ny fifidrana fiara eo amin’ireny toerana ireny saingy mamboly saina ratsy ho an’ny mpandraharaha sy mpanao politika sasantsasany eo amin’ny fitiavana te-hamaritra ny salan’ny fifanakalozana ekonomika eo amin’ny faritra misy azy.
« Dahalo » any atsimo
Ny fifandripahan’ny samy Malagasy any atsimon’ny Nosy toa tsy hahitam-bahaolana intsony. Mahavalalanona ny mahita fa toa tsy manan-kevitra hampitsaharana izany ny foloalindahy hany ka tsy sahy mamaky lay ny tena olana fa mifandrirarira sisa. Ny mponina anefa efa manomboka tsy mahazaka ny zava-mitranga intsony. Ireo mpitandro filaminana any an-toerana mila hilavo lefona satria tratrin’ny be noho vitsy. Ny ao Ambohitsorohitra anefa ampiana 600 lahy be izao raha zara raha misy 50 ireo alefa hanampy tosika ireo tena miatrika ady.
Mirehitra mena ny jiro
Ireo tranga rehetra ireo dia fambara loza ho an’ny Malagasy. Samy toe-draharaha manamora ny fijoroan’ny fanjakana kely maro no hita ankehitriny. Indrindra fa toa efa manomboka mandositra sy mampandositra ny fianakaviany ireo tomponandraikitra ara-panjakana sasany toy ny lehiben’ny distrika any amin’ireny toerana mafanafana ireny. Arak’izany dia ilaina ho tonga saina haingana ny Malagasy mba hisorohana ny teti-dratsy efa tian’ny sasany hatao amin’ny fanafarana ny miaramila frantsay hampandry tany eto amintsika. Tokony tsaroana lalandava fa zaran’ny mpanjanaka aza izany no mitranga ahafahany mandripaka izay manelilgelina ny tombontsoany sy misakana ny tsy hilatsan’izay mbola andrian’ny sain’ny Malagasy maro an’isa eo amin’ny fitondrana ny Firenena.